सेनाको हेलिकप्टरबाट डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याईयो - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
सेनाको हेलिकप्टरबाट डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याईयो
जुम्लामा आमरण अनसन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले अन्तत: बल प्रयोग गरेर काठमाडौं ल्याएको छ । बिहानबाट सुरु भएको झडप तथा धरपकडपछि अपरान्ह सरकार, डा. केसीलाई सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं ल्याउन सफल भएको हो ।
जुम्लामा वार्ता हुनै नसक्ने सरकारको अडान र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नलिएसम्म काठमाडौं नआउने डा. केसीको मागका कारण दुवै पक्षबीच औपचारिक वार्ता समेत सुरु हुन सकेको थिएन । दुवै पक्षले यसअघि नै वार्ता टोली गठन गरेका छन् । डा. केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट जुम्लास्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा अवतरण गरेको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौं ल्याईएको हो । सो हेलिकप्टरमा कर्णाली प्रदेशक मुख्यमन्त्री महोनबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेन्द्र कँडेलसहित शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी र प्रहरीको टोली सवार थियो ।
सैनिक स्रोतका अनुसार जुम्लाबाट उडेको हेलिकप्टर २५ मिनेटमा सुर्खेत पुगेर अवतरण गर्ने छ । त्यहाँ रिफ्युलिङ गरेपछि मात्रै काठमाडौंका लागि उड्नेछ । सुर्खेतबाट काठमाडौं आउन हेलिकप्टरलाई घटीमा एक घण्टा पारच मिनेट लाग्ने बताइएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिबीच डा. केसीलाई अस्पतालबाट बाहिर निकाल्न लाग्दा स्थानीय महिलाहरुले अवरोध गरेपछि प्रहरीले पुन: लाठी चार्ज गरेको थियो । अस्पताल भित्र र बाहिर प्रहरीले गरेको लाठी चार्ज पछि जुम्लाको अवस्था फेरि एक पटक तनाव ग्रस्त बन्न पुगेको थियो । सेनाको ब्यारेक बाहिर पनि स्थानीयले केहीबेर नारावाजी गरेका थिए ।